Xilliyo geedka Autumn | January 2020
Chives: Calorie, halabuurka, sifooyinka faa'iido iyo khilaafaadka
Editor Ee Doorashada January 23,2020
Ugu Weyn Ee Xilliyo geedka Autumn
Geedaha tufaaxa dayrta: waxay yaqaanaan noocyada iyo sifooyinka daryeelka
Beertaada, waa mid aad muhiim u ah inaad haysato tufaaxyo kala duwan oo dhirta kala duwan leh si ay u cunaan miraha cusub sanadka oo dhan. Maanta waxaan si aad ah u soo dhaweynay nalalka kala duwan ee dayrta ee geedaha tufaaxa, qaababka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada. Ka taxadar shuruudaha aasaasiga ah ee daryeel ee noocan ah geedaha iyo gaar ahaan beerto geedo.
Canab: waxa fitamiinada ay ku jiraan, maxaa faa'iido leh, miyay suurtogal tahay in la cuno habeenkii
Sidee loo hubiyaa boqoshaada loona habeeyo hababka dadweynaha, waana khatar?
Ragga Adam: halka ay ku koraan, cunto karinta iyo hababka daaweynta
Wanaajinta sifooyinka derbiyada: isticmaalka iyo ka horjeeda
Cagaarka celery-macaan ee kareemka ah waa khudradda la rabo beerta. Si ay u koraan khudaar miro leh oo dalagga ah, waa inaad doorataa kala duwanaanta ugu fiican oo aad raacdo talooyinka hoos ku qoran. Calaamadaha dhirta iyo noocyada kala duwan Cagaarka waxaa iska leh dhaqanka labadii sano ee dalladda. Tilmaamaha dabeecadda waa sida soo socota: dhererka baadiyaha ilaa 1 m oo leh rosette caleen weyn; caleemaha waa la kala saari karaa, cagaar dhalaalaya, oo leh caraf udgoon; dalagga xididka ayaa la aasaasay sanadka ugu horeeya; tuubada wareegsan ama mashiinka-qaabeeya; midabka tuberka waa cawl ama beeg-cad, saxarada ayaa ah caddaan ama kareem; Blooms iyo siinayaa abuur marka dib loo beerto. Read More
Beeridda gabbaldayaha waxay ka bilowdeen lix gobol oo Ukraine ah
Waxaan dhirtaa geedaha tufaaxa ee guga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xilliyo geedka Autumn 2020